RW Khayre oo Dhuusamareeb u tagaya xaqiijinta saamiga Ahlusuna ee Galmudug - Ceelhuur Online
Home > Wararka Galmudug > RW Khayre oo Dhuusamareeb u tagaya xaqiijinta saamiga Ahlusuna ee Galmudug
RW Khayre oo Dhuusamareeb u tagaya xaqiijinta saamiga Ahlusuna ee Galmudug
December 23, 2019 Duceysane621
Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Kheyre iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa la filayaa in maalmaha soo socda ay tagaan magaalada Dhuusamareeb, si ay qeyb uga noqdaan dhameystirka geeddi socodka dhismaha maamulka Galmudug.
Ilo wareedyo kala duwan ayaa sheegaya in safarka Ra’iisul Wasaaraha ee Dhuusamareeb uu la xiriiro xaqiijinta 20-ka kursi ee Ahlusuna laga siiyay Baarlamaanka Galmudug oo dhowaan la soo xuli doono.
Wararka ayaa sheegaya in Guddiga Farsamada ee Maamul dhisida Galmudug uu bilaabay diyaarinta xareynta Odayaasha Dhaqanka ee saxiixayaasha Galmudug, si ay u soo xulaan Xildhibaanada Baarlamaanka Galmudug.
Hase ahaatee waxaa la sheegayaa in weli dhiman yihiin arrimo farsamo oo la xiriira saami qeybsiga 20-ka kursi ee Ahlusuna ka imaanaya, inkastoo ay jiraan odayaasha qaar oo ka biya diidan in la qaato kaalintooda soo xulida, haddii 20-ka kursi ee ka imaanay Ahlusuna ee beel ahaan lagu salleynayo aanay odayaasha qeyb ka aheyn.
Waxaa jira shaki ku aadan in Jadwalka ay dhowaan soo bandhigeen Guddiga Farsamada uu mar kale dib u dhac hareeyo, marka loo eego waqtiga la heysto, gaabiska meelaha qaar ka jira iyo tabashada ay qabaan Odayaasha dhaqanka oo la sheegay in qaarkood lagu bedelay Odayaal kale.
Xildhibaanada Baarlamaanka Galmudug ayaa la qorsheynayaa in lagu soo xulo inta u dhaxeysa 24ka illaa 30 December, waxaana mudadaas lixda maalmood ah laga sugayaa Guddiga Farsamada inay ku soo bandhigaan Liiska rasmiga ah ee Xildhibaanada Baarlamaanka Galmudug ee 89-ka Xildhibaan.
Taliyaha Ciidamada Kenya oo socdaal qarsoodi ah ku yimid Soomaaliya
Laftagareen oo sheegay inuu gurigiisa ku booqday Mukhtaar Roobow
Sideed ruux oo lagu la’yahay fatahaadaha wabiga Shabeele